के स्वस्तिमाको कटाक्ष यी अभिनेत्रीलाई हो? :: Setopati
के स्वस्तिमाको कटाक्ष यी अभिनेत्रीलाई हो?
सेतोपाटी कला काठमाडौं, साउन १२
फोटोः विनोद पोखरेल
शुक्रबार आफ्नो आगामी रिलिज 'हजार जुनीसम्म'को ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा स्वस्तिमाले १५-२० लाख पारिश्रमिक लिदां निर्माताको हातमा ५ लाख आउँदा त्यति मजा नहुने बताइन्।
ट्रेलर सार्वजनिक गरिएपछि भएको साक्षात्कारमा खड्काले यस्तो बताएकी हुन्।
'म आफ्नो उमेर र पारिश्रमिक बाहिर ल्याउन सक्नेलाई मान्छु। म मेरो उमेर त भन्छु तर पारिश्रमिकचाँहि अलिकति लुकाएरै राख्छु, उनले भनिन्, 'तर गम्भीर रूपले भन्नुपर्दा मलाई के लाग्छ भने मैले २० लाख पारिश्रमिक लिन्छु भने ५० लाखका दर्शकचाँहि मैले तान्न सक्नुपर्छ। त्यति ताने भने मैले १५-२० लाख लिएँ भनेर अलि नाक पनि फूलाउन मिल्छ नत्र भने २० लाख लिएर निर्माताको हातमा ५ लाखमात्र हात पर्‍यो भने त्यो त अलि अफ्ठ्यारै हुन्छ।'
त्यसैगरी स्वस्तिमाले आफ्नो पहिलो प्राथमिक्तामा राम्रो भूमिका र युनिट पर्ने बताइन्।
'प्रायः सबै अन्तरवार्ताहरूमा पनि भनिरहेको हुन्छु। पैसा मेरा लागि दोश्रो प्राथमिक्ता हो। स्वस्तिमाको यति लाख पारिश्रमिक, स्वस्तिमाको त्यति लाख पारिश्रमिक भनेर अहिलेसम्म मेरो समाचार पनि आएको छैन। मेरो पहिलो प्राथमिक्ता भएको भए, त्यो आउँथ्यो होला तर पैसा मेरो दोश्रो प्राथमिक्ता हो। हुन त्यसले पनि अर्थ नराख्ने होइन। मेरा लागि पात्र र टिम पहिलो प्राथमिक्ता हो', स्वस्तिमाले भनिन्।
केहि अगाडी दार्जिलिङका एक निर्माताले बनाउन लागेको सिनेमाका लागि अर्की अभिनेत्री पूजा शर्माले २० लाख पारिश्रमिक बुझेको समाचार बाहिरिएको थियो। स्वस्तिमाको यो भनाइ कतै पूजाप्रति लक्षित त होइन भन्ने चर्चा यतिबेला नेपाली सिनेवृत्तमा छ।
साम्राज्ञी सहित अन्य अभिनेत्री तथा कलाकारहरूको बढेको पारिश्रमिकका समाचार बाहिरिने गरिरहेको सन्दर्भमा स्वस्तिमाको यससम्बन्धी समाचारहरू भने सार्वजनिक भएका छैनन्।
प्रकाशित मिति: आईतबार, साउन १२, २०७६, १०:५५:००